China Flat Shower Seti Abavelisi kunye nababoneleli-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > ISeti yeshawari > Iseti yeshawari ecaba
Iseti yeshawari ecaba Abavelisi
I-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, umenzi ophezulu ochwephesha kunye nomthengisi ngaphandle e-China kwaye ube kumgca weplastiki ngaphezu kweminyaka engama-20 kunye neshishini lempahla yococeko iminyaka engaphezu kwe-10, Kwakhona. siye saqinisekisa ngenkqubo yokulawula umgangatho ye-ISO 9002S ekuqaleni kuka-1999. sivelisa zonke iimveliso zayo eTshayina. Iimveliso zethu imigca yempahla yococeko ibandakanya oku kulandelayo: Intloko yeshawa, Ishawa yesandla, iiseti zesilayidi zikaloliwe, izibambi zeshawa, ithumbu leshawa, iseti yeshawari eFlat, isibiyeli sodonga lweshawa, izincedisi zeshawa, iShower Bidet, Ishawa & izincedisi zegumbi lokuhlambela kunye norhwebo nezinye izinto zococeko. iimveliso kwi Made in China Website.
Ukumila kweseti yeshawari ecaba yindibaniselwano yesikwere kunye nengqukuva. Inokuthi ihambelane nayo nayiphi na ishawa kwaye iya kufaneleka kakhulu. Idizayini ye-chrome-plated ye-201 yensimbi engenasici iya kwenza i-shelf iphile ixesha elide.
Sinegunya elinamandla lokuphuhlisa uluhlu olubanzi lweemveliso ezintsha ngokobukhulu obahlukeneyo kunye neenkcukacha kubathengi bethu abadala iimfuno ezahlukeneyo kwiimfuno ezahlukeneyo. Umgangatho ophezulu weshawari ethe tyaba iseti ngumgangatho ophezulu, itekhnoloji nganye kunye nomgangatho weseti yeshawari ecaba linqanaba eliphezulu lemveliso. Ngombono wethu wolawulo kunye nokukhula okuqhubekayo, iimveliso zithengiswa kakuhle kwimarike yehlabathi, eye yazuza udumo oluhle kakhulu. Ishishini lethu ligxile kwi-R&D, iOEM, iODM.
Iseti yeshawari yakudala
Iseti yeshawari yeClassic yonke ine-chrome-plated. Ukuphakama kweshawa yesandla kunokulungiswa ngokuthanda. Ukuhlamba okuphezulu kunokujikeleza i-360 degrees ngokuthanda.
ISeti yeshawa yangoku
Ikholamu yeshawari yeseti yeshawa yanamhlanje ingqukuva, isebenzisa i-201 yensimbi engenasici kunye ne-chrome-plated surface treatment. , Ishawa yakhe yesandla luhlobo lwesitshixo esinye sokutyhala, kulula ukusebenza. I-angle yeshawari ephezulu ingatshintshwa ngaphandle kwesizathu.
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili Iseti yeshawari ecaba zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu Iseti yeshawari ecaba uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.